Avadika ho politika ny tsy fahombiazana… | NewsMada
Avadika ho politika ny tsy fahombiazana…
Efa misy ve ny fiovana amin’izao governemantan’ny marimaritra iraisana izao? Na tombanana sy heverina ho misy aza izany, tsy takona afenina sy manaratsy endrika azy ny fitakiana sendikaly etsy sy eroa: fifanenjanana. Tena mahavaha olana ve ny mpitondra fanjakana? Ho hita eo… Ny mampanahy sy mahakely finoana: vitan’ny teny midina na fampitandremana ve ny raharaha? Na fandrahonana, na amboletra…
Tsy vitan’izany, tonga amin’ny fanomezan-tsiny ny tompon-draharaha, na manilika andraikitra. Tsaraina sy ampangaina amin’izao fa lasa politika ny fitakiana sendikaly. Mifangaro voraka be ihany, hono. Tsy ny filazana izany aza ve no tena politika? Na fiampangana tena… Tsy mieritreritra ary tsy manao inona ho zava-dehibe afa-tsy politika no antony? Tsy inona fa fitiavana sy fiarovan-tseza.
Izay zava-dehibe amin’ny tena ihany tsinona no heverina ho mahamaika ny hafa. Tsy mahagaga raha ahina ho politika na ambadika amin’izany avokoa izay mihetsika rehetra, na tsy inona aza. Amin’ny lafiny iray, mety ho politika tokoa no antony fototra imasomaso, fa tsy izay ao ambadika loatra. Tsy inona fa ny tsy fisian’ny politika mazava, hany ka tsy manao afa-tsy ny mamono afo amin’izay mihetsika rehetra.
Izay no mahatofoka ny maro amin’ny hoe politika, indrindra amin’ny mpanao politika. Ny lafiratsiny sisa no hita sy mibahan-toerana: fiadiana sy fitadiavana ny tombontsoa. Hany ka izay mihetsika sy miteny rehetra, ahina sy soketaina avy hatrany ho izany avokoa. Vokany, tsy izay tena olana sy ny famahana izany no mahamaika sy zava-dehibe fa ny toerana sy ny tombontsoa amin’izany… mahatofoka vahoaka.
Amin’izany, tsy hita na tsy tadiavina izay tena vahaolana noho ny tsy fahombiazana amin’izay olan’ny vahoaka ifotony. Hahagaga ve raha tsy mety milamina sy mivaha tanteraka ny olana ifotony toy ny fitakiana sendikaly, na heverina ho mivaha sy milamindamin-dratsy aza ny lafiny politika? Izay ilay ilana fiovana sy fanovana? Izay miova no afa-kanova, izay madio no afa-kanadio, izay milamina no afa-kandamina…